‘ह्याप्पी न्यू इयर’ को टिजर कस्तो छ ? « Ramailo छ
‘ह्याप्पी न्यू इयर’ को टिजर कस्तो छ ?
देवकुमार श्रेष्ठ निर्देशित फिल्म ‘ह्याप्पी न्यु ईयर’ को टिजर रिलिज गर्दै प्रदर्शन मिति पनि तय गरिएको छ । अस्ट्रेलियामा सम्पूर्ण छायाँकन गरिएको यो फिल्म अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१८ को अवसर पारेर पुष १४ गते (२९ डिसेम्बर) मा रिलिज हुनेछ । नयाँ वर्षमा घटेको एक घटनालाई नै फिल्मको मुख्य कथा बनाइएको छ । टिजर :
आरके एम प्रोडक्सनको व्यानरमा निर्मित फिल्ममा रती थापाको लगानी छ भने एप्पल इन्टरटेनमेन्टका मनोज अधिकारी लाइन प्रोड्युसरका रुपमा रहेका छन् । लभस्टोरी फिल्ममा कुशल थापा, पुकार गौतम, सन्ध्या केसी, ईश्वर थापा, पदम शाक्य लगायतका कलाकारको अभिनय छ । फिल्ममा अस्ट्रेलियन छायाँकार बेन्जामिन ड्रेको छायाँकन, विनोद ढकाल र टंक बुढाथोकीको संगीत र कुशल थापाको कथा छ ।